Fampaharetana ny Kolontsaina, Famerenana Ny Tenindreny: Ivontoerana Misahana Ny Vakoka Ao Tlingit sy Sealaska · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2018 11:10 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Martsa 2014)
Fitaovana mampiasa ny Flash ho fianarana momba ny biby anaty ranomasina, amin'ny teny Tlingit ao amin'ilay Ivontoeram-pianarana ao Sealaska (pikantsary)
“Tsy tianay hiely eny amin'ny rivotra eny fotsiny ny nataonareo, ny fomba fanaon'ny dadabenay … Eny. Nosokafanareo ho anay ito. Izany no antony hanokafanay indray ity fitoeram-pahendrena navela ho ambany fiahiantsika ity. “
Ity teny nolazain'i George Davis (Kichnáalx-Lk'aanaaw) avy ao Angoon ity no nitarika ny fanokafana ilay fivoriamben'ny Ivontoerana Misahana Ny Vakoka ao Sealaska tamin'ny 1980. Ny antom-pisian'ilay fikambanana dia ny «hampaharitra ny kolontsaina Tlingit, Haida ary Tsimshian», miaraka amin'ny fifantohana tena vao haingana mihitsy amin'ny famerenana ny tenindreny.
Amin'izao fotoana izao, ilay Ivontoerana dia misahana tetikasa mitondra ny lohateny hoe : Ireo Fanambin'ny Fampifan draisana Mankamin'ny Fitenenana tsy Miambakavaka, Amin'ny Alalan'ny Fiaraha-miombona Antoka : ny Tlingit Mentor-Apprentice Language Program (na ny Fandaharanasa Mpiahy-Mpianatra ny teny Tlingit) mifantoka amin'ny fampitomboana ny isan'ny olona mahay miteny tsara ny Tlingit amin'ny alalan'ny lasitra fanitrihana Mpiahy-Mpianatra.
Faritr'i Tlingit – naverina navoaka avy amin'ny Wikipedia (CC BY 2.0)
Tlingit no teny ampiasain'ny mponina indizena any amorony Avaratra Andrefan'i Pasifika, any Amerika Avaratra, na ilay Atsimon'i Alaska ankehitriny. Izay fiteny iray tena efa tandindonin-doza, araka ny fanasokajin'ny UNESCO azy..
Nanomana ekipa 6 ahitàna Mpiahy-Mpianatra ilay tetikasa Sealaska, izay misy iray miteny Tlingit tsy miambakavaka ary mpianatra iray (ampianarina) ao anatiny, naely nanerana ireo vondrom-piarahamonina telo any atsimo atsinanan'i Alaska. Hitohy mandritra ny 3 taona ilay tetikasa, ary manantena ity fomba fanitrihana ity mba hampivelatra vondrom-piarahamonina matanjaka ahitàna tanora mpiteny Tlingit, ary miankina aminà vondrona tanora tsy mitsahatra mitombo mianatra ilay fiteny – izay ankehitriny 500 isa izy ireo ao amin'ny sekolin'ny distrika ao an-toerana fotsiny. Fandaharanasa mifototra amin'ny asa ataon'ny Filankevitry Ara-Kolontsainan'ireo Mponina Voalohany.
Zava-dehibe amin'ny fahaveloman'ny fiteny efa tandindonin-doza ny famolavolana andian-taranaka tanora mahafehy tsara ny teniny. Araka ny voalazan'i Jasmine James, mpandrindra ny fandaharanasa ao Sealaska, amin'ireo mpiteny Tlingit 200 tsy miambakavaka manerana izao tontolo izao, roa monja no latsaky ny 60 taona.
Namolavola torohay amin'ny fiteny Tlingit, Haida, ary Tsimshian azo jerena anaty aterneto ihany koa ilay Ivon-toerana , anisan'izany ny rakibolana, boky fampianarana sy andian-pehezanteny maro, ary ny fandaharam-pianarana ho an'ny fianarana an-dakilasy sy ny toby.
Ny fitaovan'izy ireo dia ahitana fitaovam-pianarana mifampiankina, nampiasàna ny Flash, izay mampianatra ireo mpampiasa azy hianatra teny manaraka lohahevitra, toy ny biby, ny zavatra ampiasaina ao an-trano, ary ny tarehimarika.
Pejy voalohany amin'ilay torohay Sealaska ampiasàna Flash izay ianarana ny tarehimarika amin'ny teny Tlingit.
Mamoaka an-tsoratra ny ireo rakitahirin'ny fitantaràna am-bava amin'ny fiteny Tlingit ho azon'ireo mpianatra ny teny any aoriana ampiasaina ihany koa ilay Ivontoerana.
Miasa aminà sehatra hafa ihany koa ilay fikambanana, anisan'izany ny fandaharanasam-pampandrosoana ho an'ny daholobe hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fomba amam-pitenin'ireo tompontany eo amin'ny sehatry ny politikan'ny fanjakana sy federaly, ny famoahana ny loharanom-baovao, ary ny fandraketana an-tsary sy firaketana an-tsoratra ireo fivorian'ny Filankevitry ny olon-kendry mpitahiry ny Fombandrazana, atao amin'ny teny Tlingit.
Azonao atao ny manaraka tsy tapaka ny fanavaozana ao amin'ny Ivontoerana Misahana Ny Vakoka Ao Sealaska amin'ny alàlan'ny pejiny Facebook sy Twitter @SHInstitute.
20 Jona 2018Antsafa